Barcelona oo baacsanaysa Ander Herrera kaddib markii…. – Gool FM
Barcelona oo baacsanaysa Ander Herrera kaddib markii….
(Barcelona) 29 Juunyo 2017 – Laacibka khadka dhexe ee Manchester United ee Ander Herrera ayaa soo galay raadaarka kooxda Barcelona.
Warsidaha Sport ayaa qoraya in Herrera ay Barca u aragto mid ay uga maarmi karto laacibka €100 milyan lagu qiimeeyo ee PSG u safta ee Marco Verratti.
Laacibkan iskeemarka ah ayaa kubaddii ugu wanaagsanayd sida la yiri fasalkii tegey kusoo bandhigay kooxda United ee uu wato Jose Mourinho iyadoo xitaa loo saadiyay inuu fasalka soo socda noqdo kabtanka kooxda.
Yeelkeede, awoodda United ayaa tijaabo ku jirta maaddaama ay Barca laacibkan bartilmaameedsanayso haddii ay PSG u diiddo Verratti, waxaana laacibkan aad u doonaya macallinka cusub ee Barca jaalle Ernesto Valverde, oo ay soo wada shaqeeyeen waayihii Athletic Bilbao.
DEG DEG: Fabio Borini oo kasoo degey Milano + Sawirro
David de Gea oo doon doonaya qaab uu ugu biiro Real Madrid